Kooxda Fc Bayern München ee dalka Germany ayaa ku guuleeysatay horyaalka dalkaas ee Bundesliga. – Cayaaraha dunida
Germany / Wararka | By admin
Kooxda Fc Bayern München ee dalka Germany ayaa ku guuleeysatay horyaalka dalkaas ee Bundesliga.
Kooxda Fc Bayern München ee dalka Germany ayaa ku guuleeysatay horyaalka dalkaas ee Bundesliga markii 26-aad waxeeyna kooxdaan jabisay Iskoor cusub oo taariikh ahaan aan wali ka dhicin horyaalka Jarmalka .
Fc Bayern München oo horyaalka Germany 85-dhibcood ku qaaday ayaa waxa ay noqotay naadiga kaliyah ee horyaalkaan qaada 4-jeer oo xiriir ah . Laacibiinta kooxdaan ayaa soo xirtay Maaliyado ama Funaanado lagu soo qoray 4-ever oo loo la jeeday sadexda mar ee xiriirka ah .
Kooxda Borussia Dortmund oo dhanka dhibcaha bursaneysay Fc Bayern München ayaa waxeey guuldaro 1-0 ah kala soo kulantay naadiga Frankfurt . Fc Bayern München oo aaday guriga naadiga Ingolstadt ayaa waxa ay ku soo badisay 1-2 waxaana dhamaan goolasha u wada saxiixay weeraryahanka Qaranka Poland Robert Lewandowski (daqiiqadihii 15-rigoore iyo 32-aad ) .